Notebook သုံးမှာလား ၊ Netbook သုံးမှာလား.... — MYSTERY ZILLION
Notebook သုံးမှာလား ၊ Netbook သုံးမှာလား....
Notebook သုံးမှာလား ၊ Netbook သုံးမှာလား ၊ ဒါမှမဟုတ် Tablet သုံးမှာလား ၊ နောက်ဆုံး smart phone နဲ့ ပဲ ကျေနပ် မှာလား။<br>MZ members များဖြေပေး ကြပါအုံး။ ဘာကြောင့် သုံးချင် တာလဲ ဆိုတာပါ ရေးပေးပါ။ ဘယ်ဟာ လူကြိုက်များ လဲ သိချင်လို့ပါ။
I like netbook especially Lenovo S10-3C. But netbook has some problems in multitasking work. <br>Netbooks are easy to carry and long battery life, 4-10hours.<br>
for me, I want to use macbook air + ipad 2. Now, everything on the cloud. No need too much harddisk space for me. I just need to install Xcode, Chrome , iTunes , vlc, skype, facetime , textmate and transmit , dropbox, cloudapp.That all is enough. <meta charset="utf-8"> In future, I want to write code from cloud IDE with git. But xcode can't go to cloud and still need to install.
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ တိမ်တွေကြားထဲမှာ အလုပ်မလုပ်နိူင်သေးပါဘူးဗျာ။<br>Notebook နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ပါအုံးမယ်။<br>
<br><br>Singapore မှာနေတဲ့လူတွေကတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ .. မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ desktop ကိုအားကိုးနေရတုန်းပဲ ကိုစေတန်ရေ .. <br><br>ခုလောလောဆယ်တော့ Notebook ပဲသုံးပါတယ် .. <br><br>Smart Phone လောက်နဲ့ကတော့ မလုံလောက်ဘူးထင်ပါတယ် .. Smart Phone က entertainment လောက်ပဲအဆင်ပြေတယ် တကယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲလောက်အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး .. <br>
လူတွေကလည်း ကိုယ့်မရှိတာ လိုချင်တာပါ Desktop ရှိတဲ့လူက Laptop လိုချင်တယ် Laptop သမားက ကြီးကြီးမားမား Desktop ဖြစ်ပြန်ရော နှစ်ခုလုံးရှိတော့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆိုပြီး Tablet ထပ်လိုချင်တာပဲ။ မြင်သလောက်ကတော့ Laptop & Tablet ကသယ်သွားလို့ရတယ်လို့ ပြောပြောနေကြလို့သာရယ် ကျောင်းသားကတော့ ကွန်ပျူတာသယ်သွားဖို့ လိုတတ်ပါတယ် တကယ်တော့ အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေမှာ သွားရင်းလာရင်း အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ရုံးအလုပ်သမားပဲရှိတယ် ကွန်ပျူတာအလုပ်နဲ့လူက ဘယ်သူမှအဲလိုမလုပ်ဘူး။ အလုပ်လုပ်တဲ့လူအတွက်က အလုပ်စားပွဲကထလာရင် ကိုယ်နဲ့အတူဘာမှပါမလာတဲ့ ပစ္စည်းကအကောင်းဆုံးပဲ ဖုန်းထဲတောင် အီးမေးကိုပိတ်ထား မဟုတ်ရင်စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်လွန်းတယ်။ :P<br>
ကိုယ့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အလုပ်အတွက် ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေမယ့်ဟာကို သုံးတာအကောင်းဆုံးပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တော့ အကြီးကြီးကို နေရာတကာ သယ်သွားဖို့လဲ အဆင်မပြေဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ခရီးသွားတုန်းသုံးဖို့ ပါးပါးလေး တစ်ခု၊ လုပ်ငန်းအကြီးတွေ ထိုင်လုပ်ဖို့ Laptop အကြီးကြီးတစ်ခု၊ အီးမေးလ်စစ်ဖို့နဲ့ စမတ်ကျဖို့ ipad ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခု အဲ့လိုအားလုံးဝယ်ပြီး ခွဲသုံးတာကောင်းတယ် .. <br> <span class="Emoticon Emoticon1"><span>:-)</span></span> <span class="Emoticon Emoticon2"><span>:(</span></span> <span class="Emoticon Emoticon39"><span>:-?</span></span> <span class="Emoticon Emoticon18"><span>#:-S</span></span>
Laptop လေးရှိရင်ရပါပြီ.. ကျောင်းမှာ Laptop ကလွဲလို့ ဘားမှသုံးလို့မှမရတာ...ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်တယ်ဆိုမှ ဝယ်ရကျိုးနပ်တာ.. မဟုတ်ရင် ရှုံးတယ်လို့ထင်တယ်.. <br>
ပေါ့တာလေးလိုချင်ပါတယ်။ အခုတောင် သင်တန်းသွားရင်သယ်ရတာတော်တော်လေးတယ်။ နောက် ကြိုးလည်းပါတော့ ပိုတောင်လေးသဗျ။ နောက် 1TB လောက်ရှိတဲ့ SSD လေးကောက်ရရင်ကောင်းမယ် :P အခုလက်ရှိ 1TB ကပြည့်တော့မယ် <br>
Morris ရေ ကိုစေတန် ပြောသလို online storage သုံးလိုက်လေ။ ဒါဆို 1TB SSD လိုက်ကောက် နေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် မြန်မာနို်င်ငံ ကနေတော့ ပြောင်းရလိမ့်မယ်။ <br>